मेरा भावि दिनहरु गीतसंगीतमै बिताउछु , लोक गायक वली
कुमाख दैनिकको यो अंकमा हामीले सल्यानको कालिमाटीमा जन्मेर काठमान्डौंलाई कर्म थलो बनाउदै बस्नुभएका बहु प्रतिभाका धनी सल्यानी गायक, सर्जक तथा लोपोन्मुख संस्कृतिका संरक्षक, नेपाल सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष कुल बहादुर वली संग गरिएको कुराकानी प्रकाशन गरेका छौं ।
स्वागत छ यहाँलाई कुल बहादुर जि ..
धन्यवाद छ तपाई र कुमाख दैनिक पढिरहनु भएका सम्पुर्ण पाठकहरुलाई ।
तीज पनि नजिकिदै छ, पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले नेपाली गीत संगीतलाई आधार बनाएर तीजका गीतहरु तथा लोक गीतहरु रेकर्ड गर्ने र बजारमा ल्याउने काममै छु र संगै पुरानो भाषालाई पनि एउटा गुरुप बनाएर फेसबुक–मेसेन्जर मार्फत देश बिदेशमा पनि पु¥याई रहेको छु, बिषेश त म अहिले गीत संगीतकै यात्रामा र केही सामाजिक कामहरुमा नै व्यस्त छु ।
तपाई गीत संगीत संगै सामाजिक काममा पनि लाग्नु भएको छ । यो क्षेत्र भनेको आर्थिक स्थिति बलियो हुने मान्छेले मात्र गर्ने काम हो भनिन्छ नि के हो ?
एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो वास्तबमा भन्दा यो एउटा संघर्ष गरेर हुने काम हो । सामाजिक कामबाट, गीत संगीतबाट पैसा कमाउछु भन्ने यदी कसैको सोच छ भने त्यो त्यति सम्भव छैन । बरु यो आफ्नो पैसा खर्च हुने काम हो । यो काम मान्छे आफ्नो इच्छाले ईज्जत तथा प्रतिष्ठाको लागि गर्ने काम हो ।
तपाई कलाकार हुनुहुन्छ कसको प्रेरणाले तपाई यहाँ सम्म आईपुग्नु भो ?
म सानै देखि गीत संगीतलाई माया गर्थे , बिहे पुजाहरुमा म दोहोरी गाउँथे । पछि रेडियो तथा संघ संस्थामा जोडिए अनि मेरा आदरणीय दाई खड्क बहादुर बुढा, कृष्णा रेउले, डम्मर नेपालीसंग भेटघाट भयो । नेपाल सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष तिर्थ थापासंग पनि सल्यान आएको बेला भेट भयो ।
कुरा हुदै जाँदा र मेरा कुरा सुन्दै गर्दा उहाँले कुल बहादुर संग क्षमता छ, गीत संगीतमा लाग्नु पर्छ भन्ने सल्लाह दिनु भयो, बिषेश त उहाँहरुकै पे्ररणा हो । त्यसरी नै मेरो यात्रा सुरु भयो मैले २०६४ सालमा जिल्ला विकास समितिले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भए त्यति बेला लोक संस्कृतिलाई माया गर्ने पुर्ण भण्डारी पंकज, पे्रम अन्सारी, नेत्र भण्डारी, प्रेमदेव गिरी लगायतको सहभागीता थियो ।
उहाँहरुले यो भाईले केही गर्न सक्छ, गीत संगीतमा लाग्ने स्वर राम्रो रहेछ भन्ने खालको सुझाव दिनु भयो र मलाई प्रेरणा मिल्यो । त्यही बर्ष नै काठमाडौं गएर “तिमी मेरै हौं यो चोलामा, आफै सोच ए काली मुटुको टुक्रालाई कति माया गर्छु होला मा” भन्ने गीत रेकर्ड गराए । यो गीतमा मलाई टिका पुनले साथ दिनु भएको थियो । त्यहिबाट मेरो गीत संगीतको यात्रा सुरु भयो ।
पहिलो गीत गाउँदाको अनुभव सुनाउनुहोस् न, कस्तो लाग्यो त्यती बेला ?
त्यो बेला मलाई कस्तो अनुभव भयो भने म सल्यानको बिकट क्षेत्रमा जन्मिएको मान्छे , आर्थिक स्थितिमा पनि समस्या हुने, मसंग अलिकति आफ्नै खर्च कटाएर राखेको केहि पैसा थियो । क्यासेट निकाल्दा धेरै पैसा लाग्छ रे भन्ने सुनेको थियो । त्यो बेला मैले मालाश्री रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गराए । त्यतिबेला गीत छिटो आएन तर पनि म निरास भइन । पछि मेरो गीत बजारमा आयो, सबेले मन पराई दिनु भो र अनि खुसी भए । पछि उतै पढ्नथाले, सजिलो हुदै गयो । गीत संगितमा पैसा भने धेरै नै खर्च भो ।
अहिले तपाईको सांगीतिक यात्रा कहाँ सम्म पुग्यो ?
अहिले मेरो ‘सुनको भाउ तोलामा, धित मारेर बस्न नि पाईएन दुई दिनको चोलामा’ भन्ने गीत बजारमा ल्याएको छु । अहिले सम्म मेरो आफ्नै स्वरमा १२÷१५ जति गीत बजारमा आएका छन् । अरु शब्द संगीत गरेका गीत पनि थुप्रै छन । मेरो भावि योजना भन्नुपर्दा पनि गीत संगीतमै सक्दो योगदान गर्ने सोच र योजना छ ।
यो बाहेक अरु के गरी राख्नु भएको छ र आर्थिक स्रोत के छ ?
मैले यो संगसंगै दोहरी साँझमा पनि काम गरी राखेको छु । मेला महोसत्वमा पनि गईन्छ, अलिकति आर्थिक स्रोत त्यहाँबाट पनि जुटाउन सकिन्छ । पहिले आफुले पैसा खर्च गर्नु प¥यो, अहिले मेरा सृजनाहरु बिक्रि भईरहेका पनि छन् । व्यवसायिक रुपमा सल्लेरी म्युजिक एन्ड फिल्मस् प्रा.लि छ ।
तपाईलाई लोपउन्मुख भाषा संस्कृतिका संरक्षक पनि भन्ने गरिन्छ, यसमा तपाई को योगदान के छ ?
हुना त समय पस्थिति अनुसार समाज बदल्लिनु राम्रो हो, तर पछिल्लो सयम हाम्रा पुर्खाहरुले गाउँघरमा बोलिने भाषाहरु अलि हराउन थालेका छन । त्यसैले म त गाउँघरमा जन्मेको मान्छे इन्टरनेटको माध्यमबाट केहीँ जोगाउने कोशिस गरिरहेको छु । सबैले हाम्रो सल्यानी भाषालाई बुझुन् भन्ने सोच्ले पुरानो ठेड भाषा बचाउन लागि परेको छु । मैले फेसबुक मेसेन्जेरमा पठाउछु, देश बिदेशमा रहने सबैले सुनेर सम्झनु हुन्छ । कसैले चिन्नु हुन्छ, कसैले को हो यो मान्छे भन्नु हुन्छ, खुसी लाग्छ । त्यस्तै भर्खरै देश बिदेशमा चर्चित कृष्णा कडेलको इन्दे्रणी कार्यक्रममा पनि गए, त्यहाँ पनि मैले यस्ता बिषय बस्तुलाई उठाए ।
तपाईबाट कसैले केही सहयोगको आशा गरे के गर्नु हुन्छ ?
कुल बहादुर वलीबाट सहयोगको आशा त गरेकै होलान्, गीत संगीतको क्षेत्रमा कोहीँ नयाँ कलाकार आउनु हुन्छ भने सल्लेरी म्युजिक एन्ड फिल्मस् प्रा.लि. आफ्नै कम्पनि छ , सल्लेरी यूटुब च्यानल छ । हामीले सस्तो दरमा गीत बजारमा ल्याउने व्यवस्था गर्र्न सक्छौं । कोही मोडल बन्ने इच्छा राखेका या जुनसुकै कला भएका तर के गर्ने भन्ने अलमलमा पर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला म के गर्न सक्छु सक्दो सहायोग नै गर्नेछु भन्न चाहन्छु ।
सबै कुरा आईसकेको छ । जाँदा जाँदै सबैले पढेर साथ दिनु होला , केही सल्लाह सुझाव भए दिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद ।
तपाईलाई पनि धन्यवाद् । हामीलाई समय दिनुभएकोेमा । फेरी पनि अवसर मिलेमा यहाँको अनुभव र भोगाईबारे हामीले पाठक वर्गमा जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौं ।
साथै पाठक वर्गमा पनि पढेर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्र्दछौं ।
प्रस्तोताः नोखिराम थापा ‘बि.क.’